နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Boyz ဘာလဲ ဘယ်လဲ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:06 PM
နိုင်းနိုင်းစနေ May 25, 2009 at 2:02 PM
Moooo ဆိုတော့ ဖြုဝဝကြီးလား
ုkoongh ဆိုတော့ ကွေးကောက်ကောက် လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်လား
ုkai ဆိုတော့ အမောက်ထောက်ထားသလားပေါ့ :D
အင်တာတွေဗျူးရလို့ မာနတွေကြီးပြီး မရေးတော့ဘူး ထင်နေတာ
ရေးပေးတဲ့အတွက် ရှဲ့ရှဲ့ပါလို့...း)
ဝက်ဝံလေး May 25, 2009 at 2:07 PM
ကိုဘွိုင်းဇ် ဒါ ညီမကို တဂ်တာလား ဟုတ်လား အဟိ
ဘာပဲပြောပြော ကျေးဇူးပဲလို့နော် သိလား
မကြွားပါနဲ့ ကိုဘွိုင်းဇ် ကိုယောက်ျားလေးမှန်းသိပါတယ်
ဟို ပေါက်စီ ပို့စ်ကြောင့်ပေါ့ အဟိ
အဲလို ပေါက်စီ ပို့စ်မျိုး များများတင်ပါဗျိုးးးးး အရမ်းစိတ်ဝင်စားလို့ တမျိုးမထင်နဲ့နော် ညီမ အစားအသောက်ကြိုက်လို့ပါ :P
juli May 25, 2009 at 2:10 PM
သြော် ဘွိုင်းဆိုတာ ဒီလိုကိုး...
နုတယ်ပြောလို့ မမကွန်တွေ့ရင်တော့ ဆိတ်ကြည့်ချင်တယ် ပြောမှာ မြင်ယောင်နေသေးတယ်..
မီးမီးချစ် May 25, 2009 at 2:28 PM
ဖတ်မလို့ပါ link လေးပေးပါ
MrDBA May 25, 2009 at 2:46 PM
နုမနု ဆိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတာ ဈေးထဲမှာ ရုံးပတီသီးဝယ်ရင် ထိပ်ကလေးချိုးကြည့်တာမျိုးကိုပြောတာလားငှင် (ဘုရား ဘုရား)
ကိုဘတို့များ ကျွန်တော့်ဘလော့ကို လာအားမပေးတာ သေချာပါတယ်။ (စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီ) ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မနေ့ကဘဲ သူများက တက်ဂ်သွားလို့ ကိုဘသိချင်တာလေး ရေးပြီးသွားကြောင်းပါခင်ဗျ။
သို့သော်လည်း သတိတရ တက်ဂ်လိုက်တဲ့ အတွက် ဝမ်းသာကြောင်းလေးတော့ ပြောသွားပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (ဟမ်)
:P May 25, 2009 at 5:00 PM
Boyz ဆိုတာ ယောက်ျားလေးကိုး.....။
NangNyi May 25, 2009 at 5:40 PM
ဘာလဲ ဘယ်လဲ ????
Ko Boyz May 25, 2009 at 5:49 PM
**နိုင်းနိုင်းစနေ** - မနေ့က မအားလို့ အွန်လိုင်း မတက်ဖြစ်တာပါဗျာ။ ဘလောက်ဂါကြီး ကိုယ်တိုင် လာတက်ဂ်ထားတာ ဆိုတော့ ရေးရမှာပေါ့။ မူလို ဖြူဖြူ၀၀၊ ကွန့်လို့ ကောက်ကွေးစတိုင်နဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ ခေါင်းမှာ ခုခေတ်စားနေတဲ့ အမောက်ထောင်ကေနဲ့ ရုပ်က အနော်ပဲ...။ အဟက်
**ငှက်ကလေး** - ရေးပြီးသာသူတွေကို မတက်ဂ်ပါဘူးကွယ်။ ပေါက်စီကြိုက်တယ်ဆိုတော့ အကြိုက်ချင်း တူနေတယ်။ ဟဲဟဲ။
**မြိုး** - ဘွိုင်းဇ်ဆိုတာ ဒီလို နုတာပါပဲ။ စလုံးမှာတော့ ဆိတ်ရှားတယ်။ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲတော့ သွားကြည့်လို့ရမယ် ထင်တာပဲ။
**နေသီရိ** - လောကအလှမှာပါ။ လင့်ခ်တော့ မှတ်မိတော့ဘူး။ လောက အလှ ဟုမ်းပေ့ခ်ျကနေ သွားလို့ ရပါတယ်။
**ကိုကိုဒီဘီ** - မနေ့က မအားလို့ ဘယ်မှကို မဖတ်ဖြစ်ပါဘူးလို့ စကားပလ္လင်ခံထားပါတယ်ဗျား။ လက်ညိုးတော့ လာမချိုးပါနဲ့နော်။
**ဆင်ဆင်** - ယောက်ျားလေး အယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ယောက်ျားလေးပါဗျန့်...။
**ညီညီ** - ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆိုတာ ခေါင်းစဉ်နဲ့ လူကို ဖမ်းစားတာ။
khin oo may May 25, 2009 at 10:19 PM
သူများက အစောကြီးကမေးတော့boyz ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ။ သူ့ နိုင်းနိုင်းမေးတော့ဖြေလိုက်တာ။ မုန်းစရာကြီး။
khin oo may May 25, 2009 at 10:20 PM
ပြောလိုက်သေးတယ် ။ဂျီတော့မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က လာပြောတယ်တဲ့ .အင်ကြီး။ နိုင်းနိုင်းကို ဘေးမှာ လင့်ထားပြီးထွက်သမျ သွားဖတ်နေတဲ့သူကများ အိုက်တင်ခံ နေသေးတယ။် တို့က အစောကြီကတည်းက သွားဖတ်ပြေီးသာ. တွေ့သားဘဲ. မပြောပါဘူး. သေတောင်မပြောဘူး။
Taungoo May 25, 2009 at 10:46 PM
“ဗ” နဲ့ကော ဗွိုင်းလို့ရလားဟင်။
စကားမစပ် လောကအလှက အင်တာဗျူးဖတ်လိုက်ရတော့မှ ကိုဗွိုင်းလည်း စီနီယာဖြစ်နေတာ သိရတယ်။
Bino May 26, 2009 at 1:12 AM
I thought that Boyz ဆိုတာ ယောက်ျားလေး
sound was great: :D
mae May 26, 2009 at 2:10 AM
ကိုဘ.. ရင့်သွားတဲ့အခါ နာမည်ပြောင်းဖို့ ကြိုစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ အကြံပေးပါရစေ၊
p.s. "ယောက်ျားလေး" က အဲ့လိုပေါင်းလို့လား?
နိုင်းနိုင်းစနေ May 26, 2009 at 9:13 AM
ခင်ဦးမေကတော့ လုပ်ပြီ...း)
ဖြေရှင်းရခက်ကုန်မှာ စိုးလို့ပါ... :D
Ko Boyz May 26, 2009 at 9:39 AM
**ခင်ဦးမေ** - ဒုက္ခ။ အန်တီ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ဂယောင်ကတမ်း ထလုပ်နေသည်။ စောစောအိပ်ပါ။ မနက် ၃ နာရီမှ အိပ်ပြီး မနက် ၆ နာရီကို ပြန်ထတာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ အိပ်ချိန် မလောက်ပါဘူး။
**တောင်ငူ** - “ဗ” (ဗထက်ချိုင့်)နဲ့ ဗွိုင်း ရင် Voyz ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွယ်။ ဘယ်က စီနီယာဆိုတာ သေချာပြောပြပါ။ စီနီယာ ဖြစ်တာ များနေပြီကွယ်။ ရင်ခုန်လိုက်ထှာ...။
**Mae** - နာမည်က နာမည်သာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြောင်းဖို့ မစဉ်းစားတော့ပါဘူး။ ပြောင်းရင် ကိုယ်ဘယ်သူဆိုတာ ချက်ချင်း ဖမ်းမိဖို့ ခက်ပါတယ်။ မဲလေးတို့ ခေါ်နေကျ ကိုဘ ဆိုတာလဲ မဆိုးဘူးပဲ။
မြန်မာစာရေးနည်းမှာ အရင်က အတိုချုံးရေးနည်း ရှိပါတယ်။ လက်ဘက်ရည် ဆိုတာကို -က် ကသတ်က နှစ်ခု ဖြစ်နေတော့ ချွေတာရအောင် ဆိုပြီး -က် ကို ဘုံထုတ်ပြီး လ္ဘက်ရည် ဆိုတာ ရေးခဲ့တယ်။ အခုလဲ ယောက်ကျားလေး ဆိုတာကို ကကြီး နှစ်လုံးတူတာကို ဘုံထုတ် တစ်လုံးတည်း ရေးမယ် ဆိုပြီး ယောက်ကျားလေးကနေ ယောက်ျားလေး ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပေါ့။ တစ်ချို့ကတော့ ကင်းစီး လို့ ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကင်းစီး -င်္ ဆိုတာက သိသလောက် ငသတ် -င် ကို အတိုရေးတာပဲ။ ဥပမာ မင်္ဂလာ ဆိုတဲ့ စကားမှာ မင်ဂလာ ရဲ့ မင်နားက ငသတ် င် ကို အတိုကောင် -င်္ ဆိုပြီး ဂငယ် အပေါ် တင်လိုက်တာပဲ။ တစ်ချို့က ယောက်ျားလေးကို ယောင်္ကျားလေး ဆိုပြီး ကင်းစီးတပ် ရေးတယ်။ ယောင်္ကျားလေးဆို ယောင်ကျားလေး ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ယောက်ျားလေး လို့ရေးမှပဲ အမှန် ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကိုးကားစရာ သတ်ပုံကျမ်းက လွယ်လင့်တကူ မရှိလေတော့ လေ့လာမှတ်သားမိသလောက် ရှင်းလင်းရတဲ့အတွက် မှားချင် မှားနိုင်ပါတယ်။
**နိုင်းနိုင်း** - အဟက်။ သူ့နိုင်းနိုင်း မဟုတ်ပဲ ငါ့နိုင်းနိုင် ဆိုရင်ကော အဆင်ပြေလား။ (နောက်တာပါ။)
ဂျူနို May 28, 2009 at 3:15 AM
သတိယတယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာတယ်ဗျို့ ။
နေ့ ကောင်းရက်သာ တနေ့ နေ့ မှာ ရေးလိုက်မယ်။
ကိုလူထွေး May 28, 2009 at 4:17 AM
တစ်ခါသားမယ် ... (ခက်ဆစ်ဖြေပေးပါ)
ခင်ဗျားပြောမှ ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ် ပန်းပုဆရာဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေပြီ...
ကိကီတစ်ယောက်ကလဲ ဟိုထွေးဒီထွေး ကိုလူထွေးတဲ့... မြိုမချရက်လို့ ထွေးထုတ်သတဲ့...
Ko Boyz May 28, 2009 at 5:54 AM
မအယ် - သတိရတဲ့ တစ်နေ့ ရေးပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုလူထွင်း - တစ်ခါသားမယ် = တစ်ခါတုန်းက ဆိုတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ မန်းလေးမှာ ကျောင်းတက်တုန်းက နယ်စုံက လူတွေ လာတာ ဆမိတ်ခုံက သယ်ရင်းတွေ အဲလို ပြောကြတာပဲ။
Moe Cho Thinn May 28, 2009 at 11:44 AM
မမ ရေးတာ ဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။ သူ ခြေဆောင့် နေပုံတောင် မြင်ယောင်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ ကဘ ဆိုတဲ့ နစ်ခ် ရဲ့ ဟစ်စထရီလေးရော သိရမလား။ ဖြေမယ့်ပုံလဲ မပေါက်ပါဘူး။ (ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ရေရွတ်သွားတယ်)
Ko Boyz May 28, 2009 at 12:34 PM
အယ်... မချိုသင်းက ကော်မန့်ပဲ လာဖတ်လေရော့သလား။
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်ကပဲ ရေးတာ ဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် မရောက်လို့လား။
khin oo may May 30, 2009 at 2:36 AM
khin oo may May 30, 2009 at 2:38 AM
khin oo may May 30, 2009 at 8:00 AM
30 May 09, 05:56 AM
MCT: မမက ကိုဘ တဂ်တာကျတော့ ရေးသကိုး။
MrDBA June 4, 2009 at 4:49 PM
အရီးအကြောင်းသိချင်တာမှန်သမျှ ကိုဘကိုဘဲ တက်ဂ်ခိုင်းရမယ်။ သိသွားပြီ။ ဒါ့ပုံပြပါဗျို့ဆိုတဲ့ တက်ဂ်ပို့ရေးခိုင်းပါလား ကိုဘ။ အဲဒါဆို သူမငြင်းရဲပါဘူးလေ ..ငှဲငှဲ။